Alatsinainy, May 28, 2007 Alarobia, Jolay 4, 2007 Douglas Karr
Andro fahatsiarovana any Etazonia izao. Ny Andro Fahatsiarovana dia andro iray izay hanaovantsika fanekena ireo izay nandoa ny vidiny farany ho antsika. Ny fanajana ny maty dia tsy fanamafisana ny ady, fa kosa fanomezana ho an'ireo izay tsy niverina tany amin'ny namany sy fianakaviany intsony.
Betsaka ny olona manafangaro ny Andron'ny Veterans amin'ny Andro Fahatsiarovana… samy hafa be izy roa. Andro veteranina dia manome voninahitra an'ireo veterans velona na maty, izay mety niady na tsy nila nanao izany nandritra ny fanompoana ny fireneny. Ny Andro fahatsiarovana dia natao ho an'ireo izay niady sy maty.
Raha ny fandehan'ny tantara dia tsy faly tamin'ny antso an'ny Extinguish Lights ny Jeneraly Butterfield, nahatsapa fa tsy ara-dalàna loatra ilay antso mba hanamarihana ny faran'ny andro, ary niaraka tamin'ny fanampian'ny brigade brigade, Oliver Willcox Norton (1839-1920), nanoratra Taps hanomezam-boninahitra ny olony raha tany amin'ny toby tao Harrison's Landing, Virginia, taorian'ny ady fito andro.
Ireo ady ireo dia natao nandritra ny fampielezan-kevitra Peninsular tamin'ny 1862. Ny antso vaovao dia naneno tamin'io alina io tamin'ny Jolay 1862, ary vetivety dia niparitaka tamin'ny vondrona hafa ao amin'ny Union Union ary voalaza fa nampiasain'ny Confederates ihany koa. Taps dia nantsoina tamin'ny fomba ofisialy taorian'ny ady.
Avy amin'ny tranokala Taps Bugler.
[Feo: https: //martech.zone/wp-content/uploads/2007/05/taps.mp3]
Ny paipaika dia tsy tany am-boalohany, azo inoana fa nosoratana tamin'ny antso an-tariby mitovy amin'izany, antsoina hoe Tattoo, izay nilalao adiny iray talohan'ny tokony hamaranan'ny miaramila ny andro ary hatory. Ny olona sasany dia tsy mahatsapa ihany koa fa ny teny dia nosoratana ho an'i Taps, ilay antso bitika tsara nefa mampatahotra natao ho fanomezam-boninahitra ireo rahalahintsika sy anabavintsika lavo:
Tapitra ny andro, lasa ny masoandro,
Avy amin'ny havoana, avy amin'ny farihy,
Avy any an-danitra.
Milamina ny rehetra, miala sasatra soa aman-tsara,
Manala ny mazava; Ary lavitra
Mandeha ny andro sy ny kintana
Mirary soa anao; Andro lasa,
Efa alina ny alina.
Misaotra sy dera, Ho an'ny andronay,
Neath ny masoandro, Neath ny kintana,
Rehefa mandeha izahay, Izao no fantatsika,
Androany koa dia tsingerintaona faha-25 an'ny Fahatsiarovana ny veterana any Vietnam.
May 28, 2007 amin'ny 11: 32 AM
Voamarikao ve fa nomen'i Google ny tehina indray ny veterana tamin'ity taona ity tamin'ny tsy nanolorany sary famantarana ny Andro Fahatsiarovana namboarina? Manaja ny zava-drehetra izy ireo manomboka amin'ny Andron'ny Tany ka hatramin'ny fetin'ny Fahaleovantena, fa maninona no tsy tian'i Google ireo mpitsabo biby?
May 29, 2007 amin'ny 11: 46 AM
Mahaliana izany - tsy hitako mihitsy izany taloha. Manantena aho fa tsy zavatra voalahatra mialoha izany. Farafaharatsiny mba ho tsara ny saina amerikana apetraka amin'ny ahitra sasany. Voalaza fa nametaka sary famantarana ho an'ny Fetin'ny Fahatsiarovana tany Kanada izy ireo izay nisy an'i Poppies, saingy tsy nisy na inona na inona teto.
Mahaliana fa eo amin'ny solaitrabe i Al Gore. Angamba azony atao ny mampiseho ny fanohanany ireo maherifontsika lavo tamin'ny alàlan'ny firesahana amin'izy ireo.